Ihe omume na-abịa - Gaa na Hultsfred
Omume Search na Echiche Igodo
Tinye isiokwu. Chọọ maka Ihe omume isiokwu.
Họrọ ebe. Chọọ ihe omume site na ọnọdụ.
Choo ihe omume
Zoo ihe nzacha
Omume Echiche Igodo
Gbanwe ọ bụla nke ụdị ndenye ga-eme na ndepụta nke ihe iji melite na ẹdụk results.
Mepee nzacha	Mechie nzacha
Lelee mmemme niile
Gosi naanị mmemme ịntanetị
Zoo mmemme niile n'ịntanetị
Nu	Nu	 - 2022-05-24	24 Mee
Mee 17 na elekere isii. - 16: 00	 ugboro ugboro
Nbanye na Digitek
Ọba akwụkwọ Hultsfred	Västra Långgatan 46, Hultsfred, Kalmar County
Mọnde 10-12 Tuzdee 14-16 N'oge mbata, ndị bi na ime obodo nwere ike nweta nkwado ka ha nwee ike sonye na ohere dijitalụ. Ndị ọrụ nọ na saịtị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, nyere aka n'ịchaji ụgwọ
Mee 17 na elekere isii. - 19: 00
LGBTQI mgbe ahụ na ugbu a
LGBTQI mgbe ahụ na ugbu a Okwu okwu ya na Edward Summanen Edward Summanen, onye dere akwụkwọ "Queera times - LGBTQI mgbe ahụ na ugbu a" na-enye na nkuzi a okwu mmalite maka oge a.
Mee 17 na elekere isii. - 20: 30
Ọ BỤRỤ na Hebe - Överums IK
Ọla ọcha	Parkvägen 17, Silverdalen
Nchịkọta: 18: 00 pm
Mee 18 na elekere isii. - 14: 30	 ugboro ugboro
Gaa na Hultsfred ma na-asụ Swedish! Wenezde 13.00-14.30 malite 6 Eprel Anyị na-ezukọ na mpụga ọnụ ụzọ ọba akwụkwọ wee jee ije na mpaghara Hultsfred. Ọnụ ụzọ Fraịde! Maka ozi ndị ọzọ kpọtụrụ:
Mee 18 na elekere isii. - 16: 30	 ugboro ugboro
Dabere na Bible
Ụlọ ọrụ maka ụmụaka n'agbata afọ 6-12. Achọrọ ndebanye aha tupu oge eruo, kpọtụrụ ọbá akwụkwọ Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, naanị kpọtụrụ! biblioteket@hultsfred.se, 0495-240088
Mee 18 na elekere isii.
Ugbo Hultsfred, ndozi ụlọ na Bo Lundwall
Bo Lundwall na-ekwu maka ugbo na nlekọta ụlọ ma gosi ụlọ ọrụ ya.
Mee 19 na elekere isii. - 23: 00
Mma nke Finch
NKWỤKWỌ TIKETA N'oge na-adịghị anya Nwanne duo Charm of Finches si Melbourne, Australia, mee egwu egwu egwu gbasara ịhụnanya, iru uju na osisi ntakwu; Indie folk nwere ọtụtụ ihe eriri, na-ekpo ọkụ na enweghị nkebi
Mee 19 na elekere isii. - 20: 15
Chọọchị Mission	Hagadalsgatan 18, Hultsfred, Kalmar County
Na Ducks - Ọdụm
Ọgbọ egwuregwu Skrotfrag	Okporo ụzọ Målilla 1, Målilla, ógbè Kalmar
Ducks - Ọdụm
nnwere onwe	20
Mee 20 na elekere isii. - 17: 00	 ugboro ugboro
Ahịa Fraịde na Hultsfred
Hultsfred etiti	Bryggerigatan, Hultsfred, Kalmar County
Na atụmatụ Tor na etiti Hultsfred, a na-ahazi azụmaahịa ọ bụla na Fraịde n'afọ niile. N'ebe a ị nwere ike ịzụta chiiz, charcuterie, ato uto, akpụkpọ ụkwụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ogologo ya di iche
Mee 21 na elekere isii. - 13: 00	 ugboro ugboro
Ahịa flea ọdụm na Stora Aby
Ahịa flea flea	570 82 Rosenfors, Rosenfors, Kalmar County
Ahịa flea ọdụm na Stora Aby. Bịa kụọ ahịa! #visithultsfred #loppis #loppisfynd
Mee 21 na elekere isii. - 12: 00
Oge akụkọ na Swedish na Arabic
Nnọọ na oge akụkọ n'ọbá akwụkwọ dị na Hultsfred! Satọde 5/2, 5/3 na 21/5 na 11-12 anyị nwere oge akụkọ na Swedish na Arabic. Oge akụkọ ahụ dabara adaba maka ụmụaka nọ n'agbata afọ 4-7 Ogologo:
Mee 21 na elekere isii. - 14: 00
Mmiri ahịa na Ryd's Mission House
Kpochapụ ụlọ ozi	Ryds mission House, Järnforsen, Kalmar
Zute mmiri n'otu n'ime ọmarịcha obodo dị elu nke Hultsfred. Bịa hụ ụlọ mgbasa ozi anyị nke dị narị afọ 100 nke echekwara nke ọma. Ire nke osisi na perennials, arụrụ n'ụlọ na arụrụ n'ụlọ, kọfị na Lotteries. Ryds haziri
Mee 21 na elekere isii. - 15: 00
Ụbọchị Steam na Peter Danielsson
Ugwu bluuberi	Präststigen, Mörlunda, Kalmar County
Bịa na Blåbärskullen wee nweta ọmarịcha igwe uzuoku anyị sitere na 1905 nke na-agba nnukwu oche oche. Ọ ga-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma. A ga-enwekwa ohere
Målilla GOIF A - Frödinge-Brantestad SK (Nkebi 6)
Ogige egwuregwu	Atlantvägen, Målilla
Nchịkọta: 12: 00 pm
Mee 21 na elekere isii. - 16: 00	 ugboro ugboro
Ihe ngosi na Lena Loiske
Osisi Kopparslagaren	Storgatan 61, Hultsfred, Kalmar County
Ihe ngosi na Christina Roslund
Christina Roslund, mmanụ
Mee 21 na elekere isii. - 17: 05
PAW Patrol, Blaze na Bubble Guppies: ihe ọchị na sinima
Ugbu a ị nwere ohere ịhụ agwa niile ọkacha mmasị gị n'otu oge! Ahụmahụ sinima na-eme mmemme na ọsọ ọsọ maka ndị ọbịa sinima kacha nta. Ihe nkiri ahụ nwere akụkụ ọhụrụ nke
Mee 22 na elekere isii. - 12: 00
Ọnụ n'ọnụ ugoloọma na-eje ije - Frendo Hultsfred
Nabata na njem mmiri mmiri na 2022. Maka njem mmiri, anyị echela maka nchekwa ka ọ ghara ibute ọrịa. Site n'enyemaka gị, anyị na-eme ka ọ bụrụ nchekwa dị ka o kwere mee. Maachị. 6. Hagadal.
Apụta Ihe egosiputara Mee 22 na elekere isii. - 16: 00
Ndị nyocha 2022
Obodo Hultsfred	Stora Torget 5, Hultsfred, Kalmar County
Chọpụta obodo Hultsfred na Vimmerby na Sọnde 22 Mee 2022. Ụbọchị nchoputa bụ ụbọchị pụrụ iche maka ndị bi na Hultsfred na Vimmerby ịchọpụta ebe strawberry na gburugburu obodo. Were ohere mara
Mee 22 na elekere isii. - 16: 00
Ụlọ ọrụ mepere emepe Målilla Mechanical Workshop
Målilla usoro ihe omumu	Hultsfredsvägen 22, Målilla, Kalmar County
Adreesị nleta bụ Södra Långgatan 6, Målilla. Ndị otu ahụ nwere njem nlegharị anya nke ụlọ n'ụbọchị a. Ọrụ ha na-aga n'ihu, ev. mmalite nke engine.
Mee 22 na elekere isii. - 16: 00	 ugboro ugboro
Mee 22 na elekere isii. - 19: 00
Ugochi FK - IFK Västervik
Knektavallen	Folkparksvägen 3, Hultsfred, Kalmar County
Nchịkọta: 16: 00 pm
Nchịkọta: 17: 00 pm
Mee 23 na elekere isii. - 11: 00	 ugboro ugboro
Kafe obere na nnukwu
Chọọchị Ekeberg	Storgatan 53, Virserum, Kalmar County
Mepee mmemme maka ụmụaka 0-6 afọ na ụlọ ọrụ nke okenye
Mee 23 na elekere isii. - 12: 00	 ugboro ugboro
Mee 23 na elekere isii. - 16: 30	 ugboro ugboro
Ọbá akwụkwọ Virserum	Skolgatan 5, Virserum, Kalmar County
Ụlọ ọrụ maka ụmụaka n'agbata afọ 6-12. Achọrọ ndebanye aha tupu, kpọtụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, naanị kpọtụrụ! :-) Ozi kọntaktị: virserums.bibliotek@hultsfred.se, 0495-240372
Mee 23 na elekere isii. - 20: 30
Rosenfors IK - Hultsfred FK B
Mee 24 na elekere isii. - 12: 00	 ugboro ugboro
Njem Nordic na Lönnebergaboa
Lọ oriri na ọ Lụ Lụ Lönnebergaboa	Kyrkvägen 2, Lönneberga, Obodo Kalmar
Nordic na-eje ije Lönneberga Boa / Silverdalen ụlọ egwuregwu egwuregwu Tuesday na elekere iri nke ụtụtụ Ama: Birgitta 10-070 646 78
Debanye aha na kalenda
Mbupụ faịlụ .ics